नेपालमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि, स्वास्थ्य मन्त्रालय दियो जानकारी - Himali Patrika
नेपालमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि, स्वास्थ्य मन्त्रालय दियो जानकारी
हिमाली पत्रिका १० माघ २०७६, 1:26 pm
काठमाडौँ — नेपालमा नोबेल कोरोना भाइरस देखिएको छ। ‘नोबेल कोरोना भाइरस’का शंकास्पद बिरामीको रगत र र्‍यालको नमूना विशेष परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएकोमा त्यो नमूनामा भाइरस भएको पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो।
चीनमा निमोनिया उत्पन्न गर्ने नयाँ भाइरस देखिएपछि त्यहाँबाट आएका बिरामी नेपाली विद्यार्थीको शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो।
अन्य बिरामीभन्दा अलग राखेर उनको डेंगु, स्क्रब टाइफस, इन्फ्लुएन्जालगायत सबै जाँच गरिएको थियो। उनी चीनको वुहानबाट छुट्टीमा नेपाल फर्किएका थिए। नेपालमा परीक्षण गर्ने उपकरण नभएकाले उनको नमूना विदेश पठाइएको थियो।
नोबेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पर्यटकको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष स्वास्थ्य निगरानीसमेत सुरु गरिएको छ। यो भाइरसबाट बच्न हाल कुनै खोप छैन। डा. लालका अनुसार विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा शंकास्पद बिरामीको पहिचान गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली राखिएको छ।
ज्वरो, घाँटीको दुखाइ, सास फेर्न असजिलो भएका र खसखस भएका पर्यटकलाई हेल्थ डेस्कमा सम्पर्क राख्नसमेत भनिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार विमानस्थलमा शरीरको तापक्रम स्वचालित रूपमा जानकारी दिने ‘थर्मल स्क्यानर’ छैन। थर्मल स्क्यानर नभएसम्म ज्वरोका शंकास्पद बिरामी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। ‘रुघाखोकी वा ज्वरोलगायत समस्या देखिएको भन्दै स्वेच्छाले हेल्थ डेस्कमा आउनेमध्ये शंकास्पदलाई मात्र अन्य बिरामीभन्दा छुट्टै राखेर उपचार सुरु गर्न सकिन्छ,’ एक स्वास्थ्य अधिकारीले भने।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सचेतना जारी गर्दै छिमेकी मुलुकबाट आउने यात्रीका लागि दिल्ली, मुम्बई, कोलकातालगायतका विमानस्थलमा थर्मल स्क्यानरले जाँच गर्न सुरु गरेको छ। ‘हाल विमानस्थलमा शंकास्पद बिरामी देखिए तुरुन्त क्वारेन्टाइन (अन्य व्यक्तिभन्दा अलग) गरेर उपचार प्रक्रियामा लग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ डा. ओझाले भने। उनका अनुसार
नोबेल कोरोना भाइरस मात्र नभई इन्फ्लुएन्जाको मौसमसमेत सुरु भएकाले थप सतर्कता आवश्यक छ।
यो भाइरस साधारण रुघाखोकीदेखि गम्भीर सेभियर अक्युट रेस्पिरेटर सिन्ड्रोम (सार्स) को कारण बन्न सक्छ। कोरोनालगायत भाइरसबाट जोगिन नियमित रूपमा साबुनपानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। रोग सर्ने जोखिम भएका ठाउँमा बस्दा मास्क लगाउनुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिसँग धेरै नजिक नजाने, उनीहरूको भाँडाकुँडा प्रयोग नगर्ने र एकअर्कालाई छुनु हुँदैन।